IP6 Networks – Cisco Training
Author: IP6 Networks
I amaNext Generation Engineer in Networking and I love Networking. I found " iP6 Networks " for Next Generation Engineers especially Myanmar. In my past, I passed some exams from Cisco, Juniper, Microsoft, VMware etc and worked at KDDI, Ingram Micro as Engineer.
Published on December 2, 2018 December 2, 2018 by IP6 NetworksLeaveacomment
EIGRP SHA Authentication Summary
Only Named EIGRP support SHA Authentication.
SHA Authentication can be configured password directly without Key Chain.
When Key Chain configured in SHA Authentication, Key Chain is used in Authentication calculation.
When Multiple Key IDs are configured, Small Key Number is used.
This EIGRP SHA Authentication Lab is step-by-step Lab guide.
Lab explains how to configure EIGRP SHA Authentication without Key Chain and With Key Chain. Also show debug output.
Download Lab Guide > EIGRP SHA Authentication
Categories CCIE R/S
Published on September 6, 2017 September 6, 2017 by IP6 NetworksLeaveacomment
Longest-Match Routing ဆိုတာဘာလဲ
Published on September 4, 2017 September 4, 2017 by IP6 NetworksLeaveacomment
ဒီနေ့ CCNA တန်းမှာ သင်တဲ့ Concept and Lab
“Longest-Match Routing ဆိုတာဘာလဲ”
ဒီ Practical ကိုကြည့်တာနဲ့ အလွယ်တကူနားလည်ပါတယ်။
R1 ဟာ 192.168.2.1 ကိုသွားချင်တာနဲ့ Route Table မှာရှာတော့
သွားလို့ရတဲ့ Static Route နှစ်ကြောင်းကိုတွေ့ပါတယ်။
ပိုပြီး တိတိကျကျရတဲ့ Mask ကိုကြည့်လိုက်ရင် (Longest ကိုကြည့်ရင်)
/29 ဖြစ်တာကြောင့် Next-Hop IP – 12.1.1.2 ကသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Easy တယ်ဟုတ် 😉
iP6 Networks Team.
EIGRP Authentication – MD5 with Time-Based
Published on August 10, 2017 September 17, 2018 by IP6 NetworksLeaveacomment
• This Lab shows how to configure EIGRP Neighbor Authentication using MD5 in Time-Based Manner.
• This demonstrate how EIGRP use KEY ID in time manner.
• Lab also includes Troubleshooting EIGRP Authentication Mismatch Problems with debug messages.
• This Lab can be useful for CCNP R/S and CCIE R/S.
Lab Download Link >>
Categories CCIE R/S, CCNP
EIGRP Authentication Lab – MD5
Published on July 19, 2017 September 17, 2018 by IP6 NetworksLeaveacomment
• This Lab shows how to configure EIGRP Neighbor Authentication using MD5.
• Lab also includes EIGRP Authentication Mismatch Problems and
how to troubleshoot with debug messages.
ACL Deploying Guidelines for CCNA
Published on July 17, 2017 July 17, 2017 by IP6 NetworksLeaveacomment
CCNAs တွေ ACL Deploying လုပ်တဲ့အခါမှာ
• Standard ACL ကိုဘယ်မှာထားမလဲ ?
• Extended ACL ကိုဘယ်မှာထားမလဲ ?
ဆိုတာလေးကို Cisco ကဘယ်လို Recommend ပေးထားလဲဆိုတာသိထားရင် အဆင်ပြေပြေ Configuration and Troubleshooting ပိုလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။
> Standard ACL ကိုတက်နိုင်သမျှ Destination နဲ့နီးနီးထားရပါမယ်။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ Standard က Source ကိုပဲကြည့်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
မလိုအပ်တဲ့ Traffic ကို ပိတ်ပြီး Discard လုပ်ပြစ်တာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
> Extended ACL ကိုတော့ Source နဲ့နီးနီးထားရပါမယ်။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ Extended က ပိုအသေးစိတ်ပြီး Source,Destination အပြင် Ports နဲ့ Protocol ကိုပါကြည့်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
Traffic ကိုစောစာဖြတ်ပြီး Discard လုပ်ထားနိင်ရင် မလိုအပ်တဲ့ Traffic ကြောင့် Bandwdith ကိုထိခိုက်မှုနည်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Concept ရပြီဆိုရင် ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ အောက်ကမေးခွန်းလေးကိုဖြေနိုင်ပါပြီ။ အဖြေကတော့ မှန်မှာလို့ ယုံကြည်လို့ မရေးတော့ပါ။ 😀 ကျေးဇူးပါ။
Which two guidelines are true for ACL ? (Choose Two)
A) Standard ACL is placed as close as possible to the source.
B) Standard ACL is placed as close as possible to the destination.
C) Extended ACL is placed as close as possible to the destination.
D) Extended ACL is placed as close as possible to the source.
Categories CCNA, Myanmar Language
Published on March 23, 2017 March 23, 2017 by IP6 NetworksLeaveacomment
World Wide Training Company ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Global Knowledge ကနေ USA မှာ Survey ကောက်ယူထားတဲ့ ၂၀၁၇ အတွက် လစာကောင်းတဲ့
အိုင်တီ လက်မှက်များ ဖြစ်ပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လမ်းကြောင်းရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ လွယ်ကူစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
” The survey was distributed globally, but this article focuses on the United States data and variations exist based on where you work, your years of experience and the type of company you work for, but this is still helpful in deciding where to spend your time and money in earning additional certifications. ”
ခါတိုင်းနှစ်များလို Security ကတော့ Top ဖြစ်နေဆဲ။ ထူးခြားတာကတော့ Amazon AWS Cloud ကနေရာရယူလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ CCNA, JNCIA , MCSA, RHCSA, VCP အားလုံးဟာ သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ကျွမ်းကျင်ရင် Salary တစ်မျိုး။ နည်းနည်းကျွမ်းကျင်ရင် Salary ကတစ်မျီုး ဖြစ်ပါတယ်။ Language တကယ်ကျွမ်းကျင်ရင် Salary တစ်မျိုး။ Language နည်းနည်းကျွမ်းကျင်ရင် Salary ကတစ်မျီုး ဖြစ်ပါတယ်။
Specialize တစ်ခုခုကိုသိရင် Salary ကတစ်မျိုး။ Overall သိရင် Salary ကတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေး အရေးကြီးတယ်။ သိစေချင်ပါတယ်။
တစ်ချို့ Associate Level Cert တွေဟာ Professional တွေထက်လစာပိုများနေတာ Professional Level Cert တွေဟာ Expert တွေထက်လစာပိုများနေတာ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ခုလောက်ဆို တွေးစရာလေး တစ်ခုခု ရသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မူရင်း >> https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/03/18/15-top-paying-it-certifications-in-2017/#727af90a5676
Categories CCNA, CCNP, Uncategorized